အနုပညာ Archives - TheeSayChin
ပြည်သူလူထုကြားရေပန်းစားနေတဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Idol Season(4)မှ ပြိုင်ပွဲဝင်ဟောင်း ထက်အဉ္ဇလီကတော့ သူမရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့မှာ အလှူတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ လှည်းတန်း၊ဗားကရာဘူတာ၊ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဘက်ခြမ်းတို့မှာ အအေး ကြက်သားအားလူး၊ ဘာလာချောင်ကြော်၊ ထမင်းဘူးများနှင့် စောင်၊ခေါင်းအုံးတို့ကို လူအယောက်(၁၅၀)စာ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ထက်အဉ္ဇလီက သူမအခုလို သွားရောက်လှူဒါန်းဖြစ်တဲအကြောင်းကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့က တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ သူမကိုချစ်ပြီး အရမ်းအားပေးတဲ့ ဖန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရုတ်တရက် Accident ဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားရတာကြောင့် ၎င်းဖန်အမျိုးသမီးကိုရည်စူးပြီး လှူဒါန်းမယ့်အေကြာင်းကို ပြောပြထားခဲ့ပါတယ်..။ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့မှာ သူမနဲ့အတူ We Love Fan တွေနဲ့အတူ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပုံလေးတွေကို “ထက် လှူချင်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးလေးကိုဝိုင်းဝန်းပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြသူများနှင့် ထမင်းဘူး စောင်၊ခေါင်းအုံး များလိုက်လံ ဝေရာတွင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ထက်ရဲ့နှလုံးသား We Love Fans […]
ယနေ့ခေတ်ကြီးကတော့ ခေတ်မီဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍတွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးလာတာနဲ့ အမျှ လူသားတွေအတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်တွေဟာ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို များပြားလာတဲ့ အပန်းဖြေစရာ စိတ်ထွက်ပေါက်တွေထဲမှာတော့ Mobile Game တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Mobile Game တွေကို ဆော့ကြတဲ့ အထဲမှာတော့ အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ကစားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကစားကြတဲ့အထဲမှာတော့ ပြည်သူချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေ ထဲမှာလည်း မကြီးစိုးက တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြီးစိုးကတော့ Mobile Legend ကို မြင့်မြတ်ဆီကနေ ကစားနည်းသင်ယူပြီး ကစားခဲ့တာကိုလည်း ဟိုအရင်က အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေခဲ့တာကို ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောချင်လွန်းလို့ က ML ဝါသနာအိုးတွေကို မကြီးစိုးရဲ့ Rank ရောက်ရှိနေမှုကြီးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ […]
Zawgyi Font ဖှငွ့ဖတရွနွ မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရနွ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ ထပမွံစိုကထွူမညွ၊ လကရွှိတှငွ မှို့တှငွး အဓိကလမွးမမှား၌ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ စိုကထွူထားပှီး …… မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရေး ဆောငရွှကရွာတှငွ စညပွငသွာယာ၏ ဘဏဍြာငှတဈခေုတညွးဖှငွ့ လုပဆွောငမွညဆွိုပါက (၅)နှဈခနွ့ ကှာမှငွ့နိုငပွှီး အလှူရှငမွှား၏ ပါဝငလွှူဒါနွးမှုကှောငွ့သာ ယခုကဲ့သို့ (၂)နှဈအတှငွး အပှီးဆောငရွှကနွိုငခွှငွး ဖှဈကှောငွး ဦးကှောဆွနွးမှငွ့က ပှောသညွ။ “အလှူရှငတွှရေဲ့ အလှူကလညွး တောတွောမွှားပါတယွ။ သိနွးပေါငွးကို သောငွးနဲ့ခှီနတောပါ”ဟု ဦးကှောဆွနွးမှငွ့က ပှောသညွ။ . မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရနွ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ ထပမွံစိုကထွူမညွ၊ လကရွှိတှငွ မှို့တှငွး အဓိကလမွးမမှား၌ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ စိုကထွူထားပှီး မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရေး ဆောငရွှကရွာတှငွ စညပွငသွာယာ၏ ဘဏဍြာငှတဈခေုတညွးဖှငွ့ […]
Zawgyi Font ဖှငွ့ဖတရွနွ Myanmar Idol Season2မှပှိုငပွှဲဝငတွယောကဖွှဈခဲ့တဲ့ ပိုးမီကတော့ အခုလကရွှိ Season4မှာ ဝဖနမွှေုမှားနတေဲ့ နားနဲ့နားထောငပွှီး Vote ပေးကှဖို့နဲ့ နှာခေါငွးနဲ့ Vote မပေးကှဖို့ဆိုတဲ့ စကားက ဘယလွောကပွှောပှော ပရိသတကွတော့ ကှိုကနွတေဲ့သူကိုတော့ လူတိုငွးက ဆကကွှိုကနွမှောပဲလို့ ပှောပါတယွ။ “ပရိသတကွတော့ သူ့အကှိုကသွူရှိတာပဲလေ။ နားနဲ့နားထောငပွါ နှာခေါငွးနဲ့ နားမထောငပွါနဲ့ ဘယလွောကပွှောပှော ဒီတယောကကွိုခစှနွရငွေ ဘယလွောကပွှောပှော ဒီနားကကှိုကနွတောလေ။ အပှဈပှောလို့မရဘူး။ သူကှိုကတွာသူ ပေးတာလေ” “ Voting စနဈဖှဈနတောကှောငွ့ ဒါကှီးကိုအရမွးမခံစားနဲ့ ပှိုငပွှဲဝငတွှကေ ကိုယလွှှောကခွငှတွဲ့လမွးကို ရောကနွပှေီ။ ကိုယွ့ဘကကွ အကောငွးဆုံးကှိုးစားသှား အကောငွးဆုံးကှိုးစားတာအတှကွ ထိုကတွနတွာက ရောကလွာမှာပါ” လို့ ပိုးမီကပှောပါတယွ။ Season 1 […]
LOCAL NEWS အနုပညာ အာကစား
မိသားစုကို အချိန်ပေးပြီး ကမ်းခြေကို အပန်းဖြေခရီး ထွက်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
အောင်လအန်ဆန်းဟာ ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာကို ဂုဏ်တက်အောင် အမြဲတမ်း ကြိုးစားပေးနေခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အောင်လအန်ဆန်းကြောင့်လည်း မြန်မာ ဆိုတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံတွေ တော်တော်များများက ချစ်လာ အားပေးလာကြတယ် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ လက်ဝှေ့ ထိုးသတ်ပွဲတွေ တိုင်းမှာ အောင်လအန်ဆန်းဟာ အမြဲတမ်းနီးပါး နိုင်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ရယူပေးနေခဲ့ပြီး သူ အနိုင်ရရှိတိုင်းမှာလည်း မြန်မာ့ စပါးအုံးမြွေကြီး အဖြစ် တင်စားပြောဆိုခံရတာနဲ့ အညီ မြန်မာနိုင်ငံအလံကိုပဲ ခြုံပြီး အောင်ပွဲတွေ ခံတတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့်လည်း မြန်မာပရိသတ်တွေက အောင်လအန်ဆန်းကို ပိုတိုးပြီး ချစ်ခင် အားပေးကြတာပါ။ အောင်လအန်ဆန်းဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ သားလေးနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပြီး မိသားစုကို ကြင်နာတတ်တဲ့ အဖေကောင်း တစ်ယောက်လည်း […]
ခီမောင်နှံကြောင့် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ရဲ့ အိမ်မက်ဆိုးကြီးလား
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ခီမောင်နှံက အခွန်ရှောင်ပြေး အနုပညာသမား တွေအတွက် အိမ်မက်ဆိုးကြီး ဖြစ်လေမလား ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ အခွန်ဆိုတာ နိုင်ငံ တိုင်းမှ ာရှိနေကြသလို မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွင် အစ အညစ်အကြေးခွန်အဆုံး ပေးဆောင်နေကြရတာဟာ နိုင်ငံသား တိုင်းရဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါ ။ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ခီမောင်နှံရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ရုပ်ရှင် လောကသားတွေ သွေးပျက် ခြောက်ခြားသွားမယ့် ကြေညာချက် တစ်ခု ထွက်ပေါ် လို့လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး က အစည်းအရုံး ဝင်တွေအတွက် ကြေညာချက် တစ်ခုထွက် ပေါ်လာပါတယ်။ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာန က လာရောက် ညှိုနှိုင်းခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိမှာ အစည်းအရုံး ဝင်တွေရဲ့ ဝင်ငွေခွန် အတွက် […]
တစ်နိုင်ငံလုံး အနေအထားနဲ့ အရှက်ကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ရဲ့ ဗီဒီယို
အားလုံးချစ်ကြတဲ့ နိုင်ငံကျော်ဆယ်လီတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်၊ ဆရာဝန်မမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်တစ်ယောက် ယမန်နေ့ညက တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အရှက်လှလှကြီးကွဲခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ မမမြကို မလိုတဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်က အဆိုပါအကြောင်းအရာကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဖွင့်ချခဲ့တာပါ ။ မမမြတစ်ယောက် လူကြိုက်များတဲ့ ပြည်တွင်းဂိမ်းရှိုးတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Quest to Million Myanmar ရဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးငွေကျပ်နှစ်သိန်း ကို ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် မမမြတစ်ယောက် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုတဲ့အခါမှ. မှားခဲ့တာကိုတွေ့ရတာပါ (ဗီဒီယို ၏ 33 မိနစ် 22 စက္ကန့်တွင်ကြည့်ပါ) ။ မမမြ ကို အင်မတန်တော်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေအဖို့ အခုကိစ္စ ဟာ ကိစ္စ မရှိပေမယ့် မမမြ ကို တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ ထိုးနှက်စရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ […]
သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူ လို့ဆိုတာနဲ့ကျစ်လစ်သွယ်လျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့အာရုံတွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူတစ်ဦးဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ သူမဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာတိုင်အောင် ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ။ ပရဟိတအလုပ်တွေကို အားလပ်ချိန်များတွင် တတ်စွမ်းသရွေ့လုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက လေးစားအားကျနေရတဲ့ မမြတ်လေးဟာ ခရီးထွက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူပီပီ မကြာခဏဆိုသလို ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ခရီးတွေထွက်လေ့ရှိသူပါ။ ပရိသတ်တွေကိုလည်း သူမရဲ့ခရီးသွားပုံရိပ်လေးတွေ မကြာခဏဆိုသလို ဝေမျှလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း သူမရဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေကို ကြွေဆင်းနေရတာပါ။ ဒါ့အပြင် မြန်မာဆန်ဆန်အဝတ်အစားလေးတွေကိုသာ တန်ဖိုးထားဝတ်ဆင်တတ်တာကြောင့်လည်း အားလုံးကချစ်မဝဖြစ်နေရတာပါ။ မနေ့ညကတော့ သူမရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ယက်တွင် အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ စာသားအချို့ရေးတင်ထားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကတော့ ” တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုမျိုးလေးတွေဝတ်မယ်နော် ခွင့်တောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါ ချစ်ရတဲ့သူတွေကို…..၂၀၂၀ ကို ခပ်ပါးပါးလေး ဆိုးခွင့်ပြုပါ L ove […]
ချစ်သူအနားမှာရှိတုန်းက ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့ မထက်
မထက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ပညာရှင် တယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိချိန်ထိကို စမတ်ကျပြီး လှပနေတဲ့ သူ တယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ယောကျာ်းလေးတွေရော မိန်းမတွေပါ ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မထက် ကတော့ အမြဲတမ်း တက်တက်ကြွကြွနေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သလို သူ့ရဲ့စကားပြောဟန် အင်တာဗျူး ဖြေဟန်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေကိုစွဲဆောင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ မထက်ဟာ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်တင်မကပဲ မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ပါ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေပြီဖြစ်ပြီး မထက်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကျားကျားကြိုက်ကြိုက်ဇာတ်ကားကြီးဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်အားပေးမှူတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခု နောက်ပိုင်းမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားထပ်ရိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရတာကြောင့် မထက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်နေကြတာပါ။ အခုလည်း ရိုက်ကူးရေး တစ်ခုကို ဟိုတလောက ပုဂံမှာသွားပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုကျနော်တို့ပြောချင်လွန်းလို့ ကနေပြီးတော့ မထက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားသံလေးတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ မထက်က သူရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ “အချစ်ဆုံးအနားနားရှိတုန်းက ငါ့ဘဝမှာပျော်ရွင်စရာတွေအပြည့်”ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ အဲ့ဒီရေးသားထားတာနဲ့အတူ မထက်က […]
တင်ဇာမော်ဟာဆိုရင်ဟိုးအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အခုအချိန်အထိပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရထားတဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတကိုလေးလေးနက်နက်လိုက်စားခဲ့တဲ့တင်ဇာမော်ဟာ စတီရီယိုသီချင်းတွေဒီဘက်ခေတ်သီချင်းတွေကိုသာ ပိုင်နိုင်စွာသီဆိုနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်ခေတ်က သီချင်းတွေကိုလည်း ကောင်းမွန်သပ်ရပ်စွာအနှစ်သာရရှိစွာသီဆိုနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ တင်ဇာမော်ဟာ Myanmar Idol ရဲ့ ဒိုင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အားလုံးကချစ်တဲ့ ဒိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလို host ကျော်ထက်အောင်နဲ့လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး မောင်နှမတွေလိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ သီချင်းတွေတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်အသစ်ထွက်နေတဲ့ တင်ဇာမော်က လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေလည်းရရှိထားပြီး အောင်မြင်မှုကို ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိထိန်းထားနိုင်သူတစ်ဦးဆိုရင်မမှားပါဘူး။တင်ဇာမော်က မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ သီချင်းအသစ်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မြန်မာအိုင်ဒေါနောက်ဆုံးအပတ်မှာ သီချင်းအသစ်ဆိုပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ တင်ဇာမော်က သူမရဲ့ သီချင်းခွေအသစ်တွေက နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းထွက်ရမလိုဖြစ်နေတယ်လို့ “အခုက နှစ်ခုက တစ်ပြိုင်တည်းထွက်ရမလိုဖြစ်နေတော့ သူတို့နှစ်ခုကိုခြားပေးချင်တယ်။ ခုနစ်ခွေရဲ့ MV ရယ်၊ ရှစ်ခွေမြောက်သီချင်းခွေရယ်ပေ့ါနော်။ အရင်ပြီးသွားတာကတော့ ထွက်စေချင်တာကတော့ MV ကိုအ၇င်ထွက်စေချင်တယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ seven ရဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးပြတ်သွားစေချုင်တယ်။ ကာရာအိုကေ MV ထွက်သွားပြီဆိုရင် […]